Abaphathi Bezezakhiwo eNew York City, eNew York
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo Abaphathi Bezakhiwo I-New York New York City
Best of Staten Island 1 bd 2 ba condo YOKUZUZA ngokupaka kanye nokufinyelela okulula ku-N ...
Uzongithanda lesi sakhiwo esihle kakhulu, esinegumbi eliphezulu lokulala elilodwa elinethala elihle ngokubukwa okumangazayo kweNew York Harbour neVerrazano Narrows Bridge. Le gumbi lokulala le-1, igumbi lokugezela le-1.5 Cafe loft enamagumbi asanda kwenziwa ngokwezifiso, ikhishi elisha nezindawo zokugezela ezintsha zizokunikeza ngaphezulu kwezinyawo zesikwele ze-1,100 zesikhala somusa ...
buka Abaphathi Bezakhiwo eshicilelwe Izinyanga 5 edlule
A umphathi wempahla noma umphathi wezezakhiwo ngumuntu noma inkampani ethweswe icala lokusebenzisa impahla yendawo yokuhlala ngemali ethile, lapho umnikazi engakwazi ukuzitholela leyo mininingwane, noma engenandaba nokwenza kanjalo. Umakhiwo ungaba ngowomnikazi ngamunye noma ungumnikazi ngaphansi kwengxenye yesigaba, inkampani yamasheya enabanikazi futhi ingabhaliselwa ukuhlala, ukuhweba ngamahhovisi kanye nokuthengisa noma ukuthengisa. Imisebenzi ejwayelekile elindelwe kwimenenja yezakhiwo ifaka ukuthola / ukuxosha futhi ngokuvamile ukubhekana nabaqashi kanye nokuxhumanisa nezifiso zomnikazi. Ukuhlela okunjalo kungadinga ukuthi umphathi wezindawo aqoqe izintela, futhi akhokhe izindleko nezintela ezidingekayo, enze imibiko ngezikhathi ezithile kumniniyo, noma umnikazi angavele adlulise imisebenzi ethile futhi asebenzelane ngqo nabanye. Umphathi wesakhiwo angahlelela izinsiza ezahlukahlukene, njengoba zingacelwa ngumnikazi womhlaba, ngemali ethile. Lapho indawo yokuhlala (ikhaya leholide, ikhaya lesibili) kuhlala kuphela ngezikhathi ezithile, umphathi wesakhiwo angahlelela ukuqiniswa okuphezulu kokuqapha, ukuhlala ezindlini, ukugcina kanye nokuthumela izimpahla, kanye nezinye izinkontileka zasendaweni ezidingekayo ukwenza impahla intofontofo lapho umniniyo ihlala endaweni yokuhlala (izinsiza, izinhlelo ezisebenzayo, okuhlinzekwayo kanye nabasebenzi abakhona, njll.). Ukuphathwa kwempahla kungafaka nezindawo zezentengiso lapho umphathi wesakhiwo angaqhuba khona ibhizinisi, kanye nokuphatha impahla. Ezinye izindawo zingadinga ukuthi umphathi wezindawo anikezwe ilayisense lomsebenzi. Imenenja yempahla inesibopho esiyingqayizivele kumqashi womhlaba kanye nesibopho sesibili enhlanganweni. Ubudlelwano umphathi wezindawo anabo nomqashi womhlaba kanye nomqashi bubalulekile ekwakheni okulindelwe yibo bobabili amaqembu ekuqashisweni ngoba bobabili izinhlangano zizofuna futhi zilindele amalungelo athile nezinzuzo zazo.